China Drive In Racking orinasa sy mpanamboatra |Ampahafantaro
1. Mandeha miditra, araka ny anarany, dia mila fiara forklift ao anaty racking mba hampandehanana palety.Miaraka amin'ny fanampian'ny lalamby mpitari-dalana, ny forklift dia afaka mivezivezy malalaka ao anaty racking.
2. Ny drive in dia vahaolana mahomby amin'ny fitahirizana avo lenta, izay ahafahana mampiasa avo indrindra ny toerana misy azy.
Karazana racking: Midira aotsaina anao koa anefa
Fampiharana: big batch sy entana isan-karazany, toy ny sakafo, paraky ary vata fampangatsiahana.
① Fampiasana ambony ny toerana fitehirizana entana
Raha ampitahaina amin'ny fitehirizana pallet voafantina, ny fiara dia mampiasa 80% amin'ny toerana fitahirizana amin'ny alàlan'ny fanafoanana ny lalantsara, ka mitombo 40% ny tahan'ny fampiasana toerana fanatobiana entana.
② Ny haavon'ny fitahirizana azo zahana sy ny halaliny
Ny fiara amin'ny racking dia azo apetraka hatramin'ny pallets 8 ary 10m ny haavony.Fa ny famolavolana tena soso-kevitra dia ny halalin'ny pallets 4-5 ary ambaratonga 4 avo ho an'ny fandefasana / fampidinana azo antoka sy fitantanana mety.
③ Efitrano mangatsiaka
Noho ny hakitroky avo izay omen'ny rafitra racking dia mety tsara amin'ny fitahirizana amin'ny hafanana ambany ao amin'ny efitrano mangatsiaka.Koa satria fananana lafo vidy ny vata fampangatsiahana sy ny vata fampangatsiahana, ny fahazoana ny fahafaha-mitahiry betsaka indrindra sy ny fahombiazana ambony indrindra no laharam-pahamehana.Vahaolana tsara ho an'ny fitahirizana efitrano mangatsiaka izy io.
④ Midira ary mandehana
Ny fiara amin'ny racking dia FILO (voalohany amin'ny farany mivoaka) karazana racking, mitaky entana sy maka avy amin'ny lafiny iray ihany.Azo itarina amin'ny rafitra hafa izy io - Mandehana amin'ny racking.
Ny fiara dia afaka mahatsapa ny tanjon'ny FIFO (voalohany amin'ny fivoahana) amin'ny alàlan'ny fanesorana ny bracing lamosina, noho izany dia avy amin'ny ilany iray ny entana ary avy amin'ny ilany ny fampidinana entana.Ny tombony dia ny fampitomboana ny fahafaha-mitahiry indray, ny fatiantoka kosa dia ny fihenan'ny fiorenan'ny racking tsy misy bracing lamosina.
teo aloha: Carton Flow Racking
Manaraka: Gravity Racking
Conveyor, Shuttle amin'ny lalana efatra, Carton Live, Asrs Storage, Baby Shuttle, Drive amin'ny Racking,